Google inopa shanduko yebasa rayo pane imwe nzira kune yechitatu-bato makuki | Kubva kuLinux
Google inopa shanduko yebasa rayo pane imwe nzira kune yechitatu-bato makuki
Munguva yeiyo 2019 edition yeChannel Dev Summit muSan Francisco, Google yakaratidza chiratidzo chayo yewebhu, semupepeti akataura zvinhu zvinoverengeka, zvinosanganisira kuvandudzwa kweiyo Yakavanzika Sandbox, nharaunda yakachengeteka yezvinyorwa zvinodzivirira kuvanzika kwevashandisi.
Muchidimbu, Google Ini ndinoronga izvo zvegore rinotevera (chirongwa ichi chaive kubva munaNdira 2020) vhara nzira yakajairika kumakambani kuteedzera vashandisi yeInternet mune yayo Chrome browser, inozove nemhedzisiro mukushanda kweWebhu, apo kambani iri kuyedza kusangana nezvinowedzera zvakavanzika zvevashandisi.
Zano reGoogle nderekudzivirira makambani eadware nemamwe masangano kubva mukubatanidza makuki ebhurawuza rako kumawebhusaiti asiri kushanda
"Mushure mekutaurirana kwekutanga nenharaunda yewebhu, isu tine chivimbo chekuti nekuenderera mberi kwayo uye nemhinduro, nzira dzekuvanzika uye zviyero zvakavhurika seSecret Sandbox zvinogona kutsigira dandemutande rine hutano, rinotsigirwa neshambadziro." chapera. Kamwe nzira idzi padzinosangana nezvinodiwa nevashandisi, vaparidzi, nevashambadziri, uye nekugadzira maturusi ekudzora mashandiro, tinoronga kuburitsa rutsigiro rwechitatu-bato kuki muChannel. Chinangwa chedu ndechekuzviita mumakore maviri. Asi isu hatigone kuzviita tega, ndosaka tichida iyo ecosystem kuti titore mune izvi zvirevo. Tiri kuronga kutanga bvunzo dzekutanga dzekupera pakupera kwegore rino, tichitanga neshanduro yekuyera uye tichienderera nekuita munhu ”.
Mukupedzisira kugadzirisa kweprojekiti yako kutsiva yechitatu-bato makuki Nezvinangwa zvekushambadzira, Google yakati kuyedza chimwe chikumbiro kunotaridza kuvimbisa.
Google akaronga kugovana zvimwe zvitsva zvinoratidza kushanda yeiyo federated kudzidza cohort (FLoC) chikumbiro, chinova chikamu cheyakavanzika sandbox.
Chrome mainjiniya akashanda neindasitiri padanho rakakura, kusanganisira webhu rehurongwa W3C, pane Sandbox nzwisiso iyo Google nevamwe vatambi vetekinoroji vauya nazvo. Sekureva kweGoogle, mamwe emafungiro aya anogona kuongororwa zvakare.
"Ichi chirevo," Chetna Bindra, maneja wechigadzirwa cheboka kuvimba kwevashandisi uye zvakavanzika paGoogle, akadaro nezvekufambira mberi kweFooC. «Ichi hachizi chirevo chekupedzisira kana chega chekutsiva chechitatu makuki… Hakuzove neiyo yekupedzisira API iyo yatinozoongorora mberi, ichave muunganidzwa wemaAPI ayo anotendera zvinhu senge inofarira-based kushambadzira, pamwe ne zviyero zvekushandisa kesi, uko zvakakosha kuti ukwanise kuona kuti vashambadziri vanogona kuyera kushanda kweshambadziro kwavo ”.
Bindra akati kambani iyi "yaive nechivimbo chakanyanya" pamusoro pekufambira mberi kwakaitwa pazvikumbiro uye kuyedzwa kusvika parizvino.
Chinyorwa cheGoogle chinotaura kuti mhedzisiro yekuyedzwa inoratidza iyo FLoC kuve "inoshanda yekuvanzika-yakanangana neyakavimbika kune yechitatu-bato makuki." Inotaura kuti vashambadziri vanogona kutarisira kuona angangoita 95% ekushandurwa nedhora rakashandiswa kana ichienzaniswa nekikiki-based advertising.
Kunyanya, FLoC yaizoisa vanhu mumapoka zvichienderana nekutarisa maitiro zvakafanana, zvinoreva kuti 'cohort ID' chete uye kwete maID evashandisi ndiwo anoshandiswa kuvanongedzera. Nhoroondo yewebhu uye zvinyorwa zvealgorithm zvaizoramba zviri mubrowser, uye bhurawuza raizofumura chete "boka" rine zviuru zvevanhu.
"Tiri kunyatso kuona kuti imwe yeaya ekutanga kufarira-based ad sandbox tekinoroji iri chaizvo ingangoita seyechitatu-bato makuki," akadaro Bindra. “Kune mimwe miedzo yakawanda iri kuuya. Tinoda vashambadziri uye ma tech tech kuti vabatanidzwe zvakananga «
Akawedzera kuti nhamba dzekuyera dzeFooC dzinofanira kuvimbisa vapepeti. Chrome inozoita kuti macohort avepo kuti aongororwe neruzhinji nekumisikidza kwayo kunotevera munaKurume, uye inoronga kutanga kuyedza maFooC-based cohorts nevashambadziri paGoogle Ads muQXNUMX, sekureva kweblog blog.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » Google inopa shanduko yebasa rayo pane imwe nzira kune yechitatu-bato makuki
LibreOffice 7.1 Inouya neiyo Edition Kupatsanura, Zvekuongorora Zvimiro, uye Zvimwe
Kubheja pane yakavhurwa sosi kunoreva kupa iyo yega monopoly mukutengesa zvisirizvo